महेन्द्र आधारभूत विद्यालय दलजितपुरमा सरस्वती मन्दिर उद्घाटन -
दाङ,१६ माघ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ दलजितपुरमा रहेको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा निर्माण गरिएको सरस्वती मन्दिरको एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उद्घाटन गरिएको छ । विद्यालयले सरस्वती पूजाका अवसरमा विहिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मन्दिरको उद्घाटन गरिएको हो ।
विद्यालयका संस्थापक घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.५ निवासी स्व.श्री फर्साराम दाहालका छोरा तथा नातीहरु निमकान्त दाहाल, भीमकान्त दाहाल, विष्णुमणि दाहाल, केशव दाहाल, भागवत दाहाललगायतद्वारा करिव दुई लाखको लागतमा निर्माण गरिएको विद्याकी देवी सरस्वतीको मन्दिरको उद्घाटन गरिएको थियो । मन्दिरको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमलगायतका अतिथिहरुले गरेका थिए । विद्यालयले सरस्वती पूजाका अवसरमा विभिन्न खेलकुदलगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापहरु समेत सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताका प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहाल, मन्दिर निर्माणकर्ता भागवत दाहाल ,विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर लामिछाने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलगायतले सुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर लामिछानेले मन्दिर निर्माण गरेर विद्यालयलाई सहयोग गर्ने दाहाल परिवारलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । विद्यालयकी शिक्षिका निर्मला हमालको स्वागत मन्तव्यवाट सुरुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण विद्यालयका शिक्षक कुमप्रकाश वलीले गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष भोजराज रावतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।